Casemiro Oo Sheegay In Caddaalad Darro Weyn Lagu Sameeyey Kulankii Atletico & Goolka Uu Ku Dooday In Loo Diiday | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaCasemiro Oo Sheegay In Caddaalad Darro Weyn Lagu Sameeyey Kulankii Atletico & Goolka Uu Ku Dooday In Loo Diiday
Casemiro Oo Sheegay In Caddaalad Darro Weyn Lagu Sameeyey Kulankii Atletico & Goolka Uu Ku Dooday In Loo Diiday
Xiddiga Real Madrid ee Casemiro ayaa ka hadlay barbarrihii ay kooxdiisu shalay la gashay Atletico Madrid, taas oo ay ka dhalatay dood la xidhiidhay kubad ku dhacday gacanta oo ay Los Blancos ku doodday rikoodhe, hase yeeshee uu garsooraha ciyaartu ka diiday.
Casemiro ayaa qaybtii hore ku dhowaaday inuu goolka hortiisa ka helo kubbad ka timid dhinaca bidix hase yeeshee difaaca Atletico Madrid ee Felipe ayay gacanta kaga dhacday, waxaanay ka leexatay halkii uu Casemiro joogay oo haddii ay soo gaadhi lahayd ay goolhaye Oblak isku kaliyeysan lahaayeen.
Garsooraha ayaa looga yeedhay laynka oo kasoo daawaday VAR, waxaanu go’aankiisu noqday in aanu dhigin rikoodhe, isagoo ku dooday in Felipe aanu si badheedh ah kubadda ugu taabanin gacanta balse ay ku dhacday.
Casemiro ayaa si weyn uga cadhooday go’aankan, waxaana la arkayay isagoo intii dambe oo dhan kacsan oo wajigiisu ka duwan yahay sidii looga bartay.
Ciyaarta kaddib ayuu warbaahinta la hadlay, waxaanu sheegay in sharciga cusub ee kubadda cagtanta ku dhacda uu wali madmadow kaga jiro ciyaartoyda, laakiin uu ogyahay in kubaddaas uu dhalin lahaa haddii aanu Felipe gacanta ku leexin lahayn.
“Sharciyadani nooma cadda annaga, laakiin haddii aanay taaban lahayn gacanta Felipe, waan dhalin lahaa, waxaanan isku dayay garsooraha inaan taas u sharraxo. Waa go’aankiisa waana inaanu ixtiraamno. Waa garsoore wanaagsan, wuxuu tegay VAR si uu usoo eego taasina waa arrin togan, laakiin anigu waxaan isku dayay kaliya inaan u sharraxo in haddii aanay gacanta taaban lahayn in anigu aan ka dambeeyey oo aan halkaas joogay.” Ayuu yidhi Casemiro.
Xiddiga reer Brazil waxa uu qirtay in kooxdiisa laga wanaagsanaa qaybtii hore, laakiin ay haddana u qalmayeen inay ku badiyaan 2-1, waxaanu yidhi: “Waxaan filayaa inay caddaan ahayd. Qaybtii hore, way naga wanaagsanaayeen annaguna qaybtii dambe ayaanu fiicnayn. Waxay ila tahay in aanu helnay fursado aanu ciyaarta ugu guuleysan karaynay 2-1. Furuhu wuxuu ahaa shaqada kooxda oo aad u sarraysay qaybta dambe.”
Real Madrid ayuu ku dooday inay wali haysato fursad ay ugu tartanto horyaalka inkasta oo Atletico ay ka horreyso shan dhibcood, sidoo kalena ay Barcelona laba dhibcood ka sarrayso, waxaanu yidhi: “Jid dheer oo la marayo ayaa hadhsan. Mar walba waxaanu doonaynaa inaanu guuleysano, khaasatan kooxaha naga horreeya. Si fiican ayaanu u shaqaynay laakiin wax badan oo la qabto ayaa hadhsanaa. Wali waanu noolahay, waxaananu ognahay inaanu fursad heli doono.”